ပရိသတ်ကြီးအား ညအိပ် နှုတ်ဆက် အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ချပြလိုက်တဲ့ သဇင်ဦး…. – Shwe Naung
ပရိသတ်ကြီးအား ညအိပ် နှုတ်ဆက် အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ချပြလိုက်တဲ့ သဇင်ဦး….
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ သဇင်ဦးကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ် လေးတွေနဲ့ ပုရိသ တွေရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့အတူ လှပကြည်လင် တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဗီဒီယို လေးတွေ ကို လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံးတင် လေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
လတ်တလော မှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစားထားတဲ့ အလန်းစား ပုံလေးကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးဟာ ကြည့်ရှုသူတွေ များပြားခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံနေရ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပုံလေးထဲမှာ သဇင်ဦးတစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှုမှု ရှိရှိနဲ့ လှရက်လွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သင်ဇင်ဦး ကတော့ ချစ် ပရိသတ်ကြီး အား good night ဆိုပြီး နှတ်ဆက် ပြီး အလှပုံလေး တွေချပြလာပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက် အောင်ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း သဇင်ဦး ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှုနိုင် စေရန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ထပ်ခါခါပြန်ကြည် ချင်လောက်အောင် မပေါ်တပေါ်ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ အယ်လာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..
နှလုံးသား တွေလှုပ်ခက်သွားအောင် အမူအရာ လေးတွေ လုပ်ပြနေ တဲ့ မေဂရေ့စ် (VIDEO)…